Fitaovana moto maty manary - Fizarana moto manokana - Casting Minghe
Vahaolana môtô amin'ny alàlan'ny fanodinana & Cnc Machining
IATF 16949 CUTTIFIED CAST MANUFACTURING SY CNC MACHINING ho an'ny faritra moto
Ny moto dia fomba fitaterana tsotra, mahomby ary malefaka. Hatramin'ny taona 1990 dia mivoatra haingana ny moto eto amin'ny fireneko. Mifandraika amin'izany ny fanambinana sy ny fanambinana amin'ny sehatry ny moto sy ny indostrian'ny kojakoja. Raha amin'ny lafiny fiasana dia azo zaraina amin'ireto karazana ireto ny moto sy ny kojakoja moto: ny rafitra fivorian'ny motera moto, ny mekanisma fandefasana moto, ny rafitra moto, ny rafitra elektrika moto, sns. ny vokatra farany amin'ny sehatry ny moto sy ny indostrian'ny kojakoja, ary izy ireo ihany koa no ampahany mahasoa indrindra amin'ny tsena.
Ny moto dia fiara misy kodiarana roa na kodiarana telo entin'ny motera lasantsy ary tarihin'ny kodiarana aloha miaraka am-pelatanana. Mazava izy io, malefaka ary haingana. Ampiasaina betsaka amin'ny fisafoana, fitaterana sy fitaterana entana, ary ampiasaina ho fitaovana fanatanjahan-tena ihany koa. Amin'ny fomba fijery ankapobeny, moto dia mizara ho fiara an-dalambe, môtô hazakazaka am-pandehanana, moto mivezivezy, mpandeha sambo, sarety fiantsonana sns
Minghe Casting dia iray amin'ireo mpamokatra mpamorona moto Die Casting moto izay manakiana ny indostrian'ny fiara. Na ny famolavolana sy ny famokarana masinina môtô môtô na ny fizarana môtô fandefasana dia miantoka ny fandeferana avo indrindra sy ny fizotran'ny famokarana moto moto. MINGHE Casting dia manolo-tena hanatsara ny famolavolana sy ny fahombiazan'ny môtô manerana ny indostria. Ny tsipika vokatra famoahana moto ataontsika dia manarona fomba fanamboarana isan-karazany toy ny casting casting, machining cnc, grinding, CMM, sns. Ny milina fanariana maty dia misy amin'ny endriny maro karazana, toy ny milina fanariana maty 280 T sy 3000T, afaka mahatratra ny faritra moto sarotra.
Die Casting Moto faritra mpanamboatra, orinasa, mpamatsy entana avy any Shina, Natoky izahay fa hisy ny ho avy mampanantena ary manantena izahay fa afaka manana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao.
Mifandraisa aminay ny injenieran'ny moto eto an-tany anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo tetikasanao sarotra.
1.Ny fampiharana amin'ny moto mahazatra.
Ny traikefan'i MINGHE dia tsy manam-paharoa amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fanamboarana ny vahaolana maty antoka ary ny famahanana cnc ho an'ny karazana moto moto, anisan'izany fa tsy ferana amin'ny:
Piston (AC8A / ZL109)
Tsorakazo mampifandray (20CrMo)
Rafitra fizarana gazy (ADC12)
bloc cylinder (ADC12)
Lohan'ny varingarina (ZL107)
Sarony Apple (ADC12)
Fanaronana AC (ADC12)
Sarony aoriana ankavia (ADC12)
Saron-doha varingarina (ADC12)
Fitaovana mitondra fiara (40Cr)
Fitaovana entina mandeha amin'ny fotoana (20CrMo)
Vatan'ny paompy solika, seza, fonony (ADC12)
Rotor paompy anatiny sy ivelany (paompy solika) (ADC12)
Flywheel (flange 10 dia 45)
Firafitra clutch (ADC12)
2.Nahoana no mifidy anay amin'ny tetik'asa môtô
Minghe dia ISO Certified Die Casting Manufacturer ary manana traikefa betsaka amin'ny famolavolana sy ny famokarana zinc sy ny aliminioma amin'ny famaritana kalitaon'ny faritra moto.
Miaraka amin'ny milina fanontam-pirinty manomboka amin'ny lehibe ka hatramin'ny kely, manana ny fahaizany manamboatra môtô amin'ny habe rehetra izahay, manomboka amin'ny sakana Cylinder ka hatramin'ny rafitra Clutch ho an'ny faritra moto.
3. Serivisy fanamboarana hafa ho an'ny faritra moto
Ho fanampin'izany, Minghe dia manome ihany koa ny milina CNC, fanodinana famatsiam-bola, fanariana fasika ary serivisy hafa mifandraika amin'ireo faritra môtô namboarina.
Cnc milina môtô
Fitaovana fanodinana moto
Fitaovana moto fanariana fasika
4.Ny fahafahan'ny famokarana mazava ho an'ny faritra moto
Fitaovana fanariana maty ho an'ny faritra moto:
Fahafahana mamita ny faran'ny moto:
Fomba fanamboarana faritra moto isan-karazany:
Fitaovana moto moto cnc ary apetraka amin'ny casting moto:
Clutch firafitra; Varingana varingarina;
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fizarana moto
Safidio ny serivisy fanodinana moto tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahan'ny fanariana moto ataontsika dia alefa any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetikadinao mandefa moto.